China CNC mpanamboatra milina sy mpamatsy | Mestech
Machining CNC dia ny haitao izay mampiasa fitaovana milina mifehy ny fanaraha-maso informatika amin'ny alàlan'ny fikirakirana fitaovana. Ny karazana fitaovan'ny milina ampiasaina amin'ny fanodinana dia misy ny lathe CNC, ny milina fanodinana CNC, ny milina fanamafisana ary ny milina fikosoham-bary, sns.
MESTECH dia miaraka amina fitaovana milina CNC avo lenta avo lenta, miaraka amina ekipa mpamolavola injenieran'ny famolavolana sy ny milina ary fizotra henjana. Voninahitra ho anay ny manome ny mpanjifanay vokatra avo lenta, fandefasana ary serivisy ara-potoana.
Indostrian'ny milina sy fitaovana no renin'ny indostria maoderina. Ny indostria izay manao milina sy fitaovana famokarana dia ny indostrian'ny fanodinana mekanika. Ny haavon'ny teknikan'ny fanodinana mekanika dia mamaritra ny haavon'ny kalitaon'ny milina sy ny fitaovana.
Inona no atao hoe machining?
Ny milina dia ny dingan'ny famokarana entina manala ireo fitaovana avy amin'ny workpiece hahazoana ny endrika takiana sy ny habeny. Ny milina ampiasaina amin'ny fanodinana mekanika dia antsoina hoe fitaovan'ny milina. Ny fitaovana ho an'ny faritra misy milina dia misy vy, metaly tsy ferrous ary endrika hafa ary metaly miorina amin'ny tanjaka, ary koa plastika mafy sy vokatra vita amin'ny hazo. Ny milina dia mety hahatratra ny faritra avo lenta, noho izany dia antsointsika hoe milina marina. Io no fomba fanodinana lehibe indrindra amin'ny famokarana faritra milina isan-karazany.
Miaraka amin'ny fampivoarana ny teknolojia solosaina, ny teknolojia fanaraha-maso nomerika indostrialy dia ampidirina ao amin'ny fitaovan'ny fitaovana milina, izay mahatsapa ny digitalisation sy ny automatisation ny fiasan'ny milina ary manatsara be ny fahombiazan'ny famokarana sy ny fikarakarana marina. Ity karazana haitao ity izay mampiasa rafitra informatika hampiasana ny fikirakirana ny milina dia antsoina hoe teknolojia fanodinana fanaraha-maso isa. Ny fitaovana milina izay mampiasa rafitra fikirakirana solosaina dia fitaovana milina fanaraha-maso isa (masinina CNC).
Inona no atao hoe Machining CNC?
Machining CNC (milina mazava tsara) dia dingan'ny famokarana. Ny fitaovana milina dia mihazakazaka eo ambany fifehezan'ireo programa informatika. Ny programa informatika dia fehezan-dalàna mba handefasana ireo mpanapaka hamoahana ireo masinina voafantina mifanaraka amin'ny haben'ny programa misy kaody (antsoina hoe kaody G).
Ny machining CNC dia dingan'ny famokarana izay anehoan'ny rindrambaiko solosaina efa niomana mialoha mialoha ny fivezivezena ny fitaovan'ny zavamaniry sy ny milina. Ity fizotrany ity dia azo ampiasaina hifehezana andiana milina sarotra, manomboka amin'ny grinders sy lathes ka hatramin'ny milina fikotrehana sy ny router. Amin'ny alàlan'ny famolavolana NC, ny asa fanapahana refy telo dia azo tanterahina ao anaty bitsika maromaro.
Matetika, ny rindrambaiko CAM (Computer Aided Manufacturing) dia ampiasaina amin'ny fivarotana milina hamaky ho azy ny rakitra CAD (Computer Aided Design) ary hiteraka programa kaody G hifehezana ireo fitaovana milina CNC.
Inona no atao hoe milina fanodinana milina CNC?
Fitaovana milina CNC dia fitaovana milina izay mampifangaro ny fitaovan'ny milina ankapobeny sy ny rafitry ny solosaina.
Ny fitaovana milina fehezina dia misy grinders, milina fikosoham-bary, lathes, drills ary planer.
Amin'ny dingan'ny fanodinana lathe CNC, ny famaritana ny làlan'ny fanodinana CNC dia manaraka ireto fitsipika manaraka ireto:
(1) Ny fahamendrehana sy ny fahamendrehan'ny tontolon'ny workpiece dia tokony ho azo antoka.
(2) Ataovy fohy indrindra ny làlan'ny fanodinana, mampihena ny fotoana fitsangatsanganana banga ary manatsara ny fahombiazan'ny fanodinana.
(3) Manatsotra ny enta-mavesatra amin'ny isa isa araka izay azo atao ary manamora ny fomba fikirakirana.
(4) Ho an'ny programa sasany azo ampiasaina indray dia tokony hampiasaina subroutines.
Ireo karazana fitaovana milina CNC:
Masinina fanodinana 1.CNC
Foibe fametahana 2.CNC.
4. Masinina elektrika famoahana herinaratra.
6.CNC milina fitotoana mazava
Masinina famoahana herinaratra CNC
Masinina manapaka tariby CNC
Ny mampiavaka ny milina CNC
Ny milina CNC dia mandresy ny fahatapahan'ny fiasan'ny tanana amin'ny fitaovana mekanika nentim-paharazana. Izy io dia manana fahombiazana avo lenta, kalitao milamina, habe mazava tsara ary mandeha ho azy. Tena mety amin'ny famokarana avo lenta sy avo lenta. Ny machining CNC dia fomba iray ilaina hahatanteraka ny famokarana ampahany.
Ny fampiharana ny milina CNC
1. Ahenao ny isan'ny jiro sy fitaovana, ary aza mila fitaovana enti-miasa sarotra handefasana ireo faritra misy endrika sarotra. Raha te hanova ny endrika sy ny haben'ny faritra ianao dia mila manova ny fomba fikirakirana ny faritra ihany, izay mety amin'ny fampandrosoana sy fanovana ireo vokatra vaovao.
2. Ny kalitaon'ny fanodinana CNC dia miorina, avo lenta ny fanodinana, avo lenta ny famerenana amin'ny laoniny, ary afaka mahafeno ny fepetra takiana amin'ny fiaramanidina.
3. Ny fahombiazan'ny famokarana dia avo kokoa amin'ny tranga famokarana marobe sy karazany marobe, izay afaka mampihena ny fotoana fanomanana famokarana, fanitsiana fitaovana milina ary fanaraha-maso ny fizotrany, ary koa mampihena ny fotoana fanapahana noho ny fampiasana ny fatra fanapahana tsara indrindra .
4. Mombamomba ny masinina sarotra azo ampiasaina amin'ny alàlan'ny fomba mahazatra, ary afaka manodina faritra sasany aza tsy zahana. Raha fintinina dia karazana ampahany marim-pototra misy rafitra sarotra sy antokon-vokatra kely izy io, toy ny famaky, ny lava-bolo optika, ny tsimatra sns, izay mety kokoa.
Orinasa Mestech dia manome ny mpanjifa ny serivisy fanodinana milina isan-karazany amin'ny vy sy plastika. Raha mila fampahalalana bebe kokoa ianao, mifandraisa aminay.
Previous: Sady fanariana maty
Manaraka: Sombiny masinina
Cnc milina plastika
Serivisy fanaovana milina Cnc
Ivon-toeran'ny milina mijidina Cnc